Ny fanambin'ny tanàna havaozina | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | Angovo azo havaozina, Tontolo_iainana
Araka ny fantatsika rehetra, angovo azo havaozina manaitra ny fahalianana izy ireo olona marobe. Mpahay siansa sy fikambanana maro no mampitandrina antsika ny olan'ny fanohizana ny fampiasana solika fôsily.
Soa ihany fa misy tanàna sasany manana tanjona vaovao azo havaozina. Ny ankamaroan'izy ireo dia nanolo-kevitra ny hanome ny tanàna a 100% miaraka amin'ny angovo azo havaozina miaraka amin'ny daty manomboka amin'ny 2015 ka hatramin'ny 2050.
Hizaha tanàna maromaro isika:
1. Copenhagen, tsara vintana noho ny rivotra avy any ivelany
Copenhagen, renivohitr'i Danemarka, dia manana tombony manokana satria ny firenena iray manontolo dia efa nanolo-tena ho amin'ny tanjon'ny angovo azo havaozina ambadika. Raha ny marina, ny tanàna mampanantena ny ho tanàna tsy miandany voalohany raha ny resaka fandefasana entona karbona tamin'ny taona 2025 dia mora kokoa satria ny rivotry ny morontsiraka efa mahafeno ny ampahany betsaka amin'ny filan'ny angovo ao an-tanàna izy ireo
2. Munich, renivohitr'i Bavaria:
Miaraka amin'ny mponina 1,35 tapitrisa, Munich Io no tanàna lehibe indrindra fahatelo any Alemana ary iray amin'ireo ivon-toekarena manandanja indrindra eto amin'ny firenena. Tamin'ny taona 2009, nametraka fanamby ny tanàna mba hiantohana fa amin'ny taona 2025 dia avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina 100% ny famatsiana angovo ao an-tanàna.
Miara-miasa amin'ny orinasan-tanàna, Stadtwerke München (SWM), dia napetraka hiasa amin'ny tanjona mamokatra ampy amin'ny zavamaniryo Herinaratra maintso ka amin'ny taona 2025 hahatratra ny filan'ny angovo ao amin'ilay faritra misy an'i Munich, izay tombanana ho 7.500 miliara KWh farafahakeliny.
3. Aspen, Colorado: Ski Mekka
Ity tanàna ity, miorina amin'ny fanjakan'i Colorado, Etazonia, ary voahodidin'ny tendrombohitra, dia malaza amin'ny maha-iray amin'ireo toerana tsara indrindra fanaovana ski. Fotoana kely taorian'ny nananganana azy dia lasa iray amin'ireo tanàna voalohany tany Andrefana Andrefana nampiasa herinaratra elektrika izy io. Miresaka momba ny taona 1885. Ny tanàna sy ny mponina dia nanohy an'io fomban-drazana io 130 taona taty aoriana mba ho lasa iray amin'ny taona 2015 tanàna voalohany eto an-tany hampiasa angovo azo havaozina hampiasana ny 100% -n'ny rafitra herinaratra ao aminy.
California dia efa nahita fitomboana nipoaka ny angovo azo avy amin'ny masoandro ary koa amin'ny tsenan'ny fiara elektrika. Any San Diego, ity fitomboana ity dia novaina ho ezaka hananganana vondron'olona mampiasa Angovo azo havaozina 100% amin'ny 2035
5. Sydney, Aostralia: ahena 70% ny fandefasana entona amin'ny 2030
Any Aostralia dia napetraka koa ny bateria, manao izao dingana lehibe izao i Sydney. Amin'izao fotoana izao, miasa izy ireo mba hampihenana ny famoahana entam-barotra novokarin'ny efitrano fambolena hatramin'ny 70% eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny 2030, iray amin'ireo tolo-kevitr'ity tanàna ity ny hoe ny ampahatelon'ny angovo ampiasain'ny mponina dia avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina sy ny ampahatelony sisa tavela amin'ny taranaka mahery vaika.
6. Frankfurt, Alemana: famoahana zero CO2 tamin'ny 2050
Frankfurt no ao an-tsaina a lasibatra fampihenana be fatratra ny famoahana gazy karbonika. Izany rehetra izany ao amin'ny firenena izay nanolo-tena betsaka mihoatra ny ankamaroany mba hampihenana ny CO2. Na dia manaraka ny politikany 'energiewende' na ny tetezamita angovo aza i Alemana manontolo, dia mitady hampihena ny famoahana entona entona azony amin'ny 100% farafaharatsiny amin'ny farany 2050 i Frankfurt. Efa nisy a fandrosoana lehibe miaraka amin'ny fihenan'ny ny fanjifana angovo, na inona na inona firoboroboan'ny harinkarena eto an-tanàna: Frankfurt dia nanangana iray amin'ireo masoivohon'ny fiarovana ny angovo sy ny toetrandro voalohany, izay nampiroborobo ny tetika fitantanana angovo feno hatramin'ny 1985.
7. San José, Kalifornia: herinaratra avy amin'ny angovo azo havaozina tamin'ny 2022
Any afovoan'i Silicon Valley, San José dia manana tanjona ny hampiasa herinaratra novokarina tamin'ny angovo azo havaozina hatramin'ny 2022. Mba hanatanterahana izany dia nanapa-kevitra ny tanàna fa hampihena ny kasety mena mifandraika amin'ny fametrahana sy fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro. Raha ny marina dia iray amin'ireo tanàna vitsivitsy ao amin'ny firenena izay nanala ny filàna fahazoan-dàlana hanorina rehefa mampiditra tontonana amin'ny masoandro amin'ny tafo, manala ny iray amin'ireo fiarovana lehibe rehefa mampiasa angovo avy amin'ny masoandro. Anisan'izy ireo koa mikasa ny hametraka Ny herin'ny masoandro any amin'ny fotodrafitrasa monisipaly, manohana ny fanavaozana ny teknolojia ary manampy amin'ny famoronana fifanarahana fividianana angovo goavambe.
Ireo tanàna ireo fotsiny dia efa mamorona lisitra manaitra ary miara-maneho olona an-tapitrisany sy an-tapitrisany maro, izay hahena ny dian-tongotr'izy ireo rehefa mahatratra ny tanjony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny fanambin'ny tanàna azo havaozina